Owase-UKZN uzomela iNingizimu Afrika e-USA
ISITSHUDENI sase-UKZN, uNompumelelo Moyo esiyomela iKZN neNingizimu Afrika yonkana e-USA, ngoJulayi
THANDUXOLO MKHIZE | March 12, 2020
ASIKHOLWA isitshudeni sase-UKZN esenza iziqu ze-honours, esizobe siyingxenye yabazoya komela iNingizimu Afrika emncintiswaneni wokulingisa nokumodela, ozobe use-USA ngoJulayi nonyaka.
UNompumelelo Moyo (21), owenza unyaka wesine e-University of KwaZulu-Natal, kwiDrama and Performance Studies, uthi uthando lokulingisa lwaqala eneminyaka engu-10. “Lo mncintiswano owaziwa nge-International Arts Talent Showcase, ngagqugquzelwa ngubaba wami ngonyaka ophelile, ethi angiwungenele. Wangitshela konke engangikudinga ngawo futhi kwenzeka ngendlela ayesho ngayo.
“Okumangazayo wukuthi ngaya kwinhlolokhono nyakenye ngiyolingisa lapho okwathiwa angiqhubekele esigabeni esilandelayo, ngase ngiyabizwa ukuthi angize ukuzomodela, ngakwenza nalokho, ngaphinda ngakhethwa futhi ukuqhubekela esigabeni esilandelayo.”
NgoSepthemba 2019 kwaba khona isigaba esilandelayo eKrugersdorp, Silver Star Casino, lapho engalingisa khona phambi kwethimba lamajaji aphesheya okubalwa uMnuz Joey Hunter owayeyinhloko yeFord Models noNksz Rhayvnn Drummer ofaka abalingisi kwiTyler Perry Studios e-USA. Ngabe sengikhethwa ukuthi ngiyoncintisana nabanye ngoJulayi nonyaka, lapho engizobe ngilingisa ohlelweni lwe-International Modeling & Talent Association (Imta) Convention e-USA oluyingxenye yomncintiswano.
Ukuthola ukwesekwa emndenini nasebanganini kumenza angapheli amandla. Uthi abazali bakhe yibona abamgqugquzelile ekungeneleni umncintiswano.
“Ngijabule enkulu kabi ukwazi ukuthi ngiyomela iKwaZulu-Natal neNingizimu Afrika okuzongenza ngisebenze kanzima ngoba ngizobe ngiyomela abantu besifazane abancane bakuleli, abanesifiso sokuyomela iNingizimu Afrika ezingeni lomhlaba. Akusiyo into encane kepha yinto enkulu eyisibusiso kimina nasemndenini wami.
“Kulabo abanothando lokulingisa nokumodela ngingabagqugquzela ukuthi balandele amaphupho abo futhi bangenele imincintiswano efana nalena ngoba izokwazi ukubasiza bakwazi ukufeza amaphupho abo nabazali emakhaya abaxhase izingane ezifuna ukulandela amakhono obuciko ngoba akuthina sonke esizoba ngabameli, odokotela nokunye,” kusho uNompumelelo.